China Circuit Kaadị Assy Manufacture and Factory | KAISHENG PCB
Mkpuchi ọla: ENIG
N'ígwé: 6 Layer PCB
Isi ihe: Nkịtị TG FR-4
Ihe mkpuchi ọla: ENIG Ofkpụrụ nke Mmepụta: SMT + N'ígwé: 6 Layer PCB
Isi ihe: Nkịtị TG FR-4 Asambodo: ISO, RoHS MOQ: Mba MOQ
Dị derdị Solder: Free-Free (RoHS Dabara) Ọrụ Nkwụsịtụ: PCB + Components + Assembly Ule: 100% AOI / X-ray / Visual Test
Nkwado Teknụzụ: DFM efu Ofdị Mgbakọ: SMT, THD, DIP, Mixed Technology PCBA Ọkọlọtọ: IPC-a-610d
Keywords: PCB Manufacturing cost, PCB Assembly Process, PCB Population, PCB Assembly Manufacturers, PCB Assembly / Testing cost, components components, E Bipụtara Circuit Board Assembly Companies.
Fast prototype PCB nzukọ ọrụ
PCBFuture nwere ike inyere gị aka mee ka ngwaahịa gị banye ahịa ngwa ngwa karịa ndị asọmpi gị, yana nwekwara ike belata ọnụahịa. Worldwa na-arụ ọrụ ọsọ ọsọ karịa na mgbe ọ bụla ọzọ. Na mkpokọta, ụlọ ọrụ na-ebu ụzọ abanye n'ahịa na-enweta oke uru nke uru. Na PCBFuture, anyị chọrọ isoro gị ma nye ya ngwa ngwa ngwa ngwa PCB na ọrụ mgbakọ kọmputa.
EEnwere ike onye oru
Anyị na-pụrụ iche kenyere engineer maka onye ọ bụla oru ngo na ike na-enye na mgbanwe nzukọ nhọrọ ahịa anyị. Ndi oru injinia anyi bu ndi okacha amara na ndi kwesiri ntukwasi obi iji mee DFM, injinia, mmeputa na ule.
Nwere ike ịnweta PCB na PCBA ngwa ngwa kachasị otu izu ma ọ bụ ụbọchị. N'ozuzu, oge nnyefe anyị bụ izu 3, mana ọ bụghị ọnwa. ọrụ anyị ga-enyere gị aka inwe gị PCB nzukọ prototypes na mgbe ahụ na-eduzi ngwa ngwa ule, nke pụtara na ị nwere ike na-ere gị electronic ngwaahịa ngwa ngwa.
PCB nzukọ Prototype
PCB nzukọ Fast Turnaround
Kedu ihe anyị Mgbakọ PCB Prototype ọrụ?
PCBFuture bụ ọkachamara na e biri ebi wiring nzukọ ọrụ. Site n'enyemaka nke anyị ọkachamara soldering technicians, SMT njikwa injinia na akụrụngwa sourcing ọkachamara, anyị nwere ike inye ala na-eri PCB nzukọ, ukwuu mgbanwe nzukọ usoro na na ngwa ngwa ọnụ ụzọ na-ụzọ ọrụ.
PCBFuture bụ onye ruru eru iji jikwaa usoro PCB zuru ezu, nke gụnyere ịmịpụta ihe niile (PCB na akụkụ), nzukọ PCB, njikwa mma, nyocha ọrụ na nnyefe. Y’oburu n’icho ochicho osiso, inwere ike ịrịọ nkwuputa awa 24. Ziga ozi na emailsales@pcbfuture.com
Nke gara aga: China E Bipụtara Circuit Board Assembly Manufacturer Manufacturer Manufacturer - Circuit Kaadị Assir - KAISHENG
Osote: Mgbakọ nzukọ nchịkwa